Antonio Conte Oo Ka Jawaabay Waxa Ka Jira In Kooxdiisa Inter Milan Ay Doonayso Lionel Messi - Gool24.Net
Antonio Conte Oo Ka Jawaabay Waxa Ka Jira In Kooxdiisa Inter Milan Ay Doonayso Lionel Messi
Tababaraha kooxda kubadda cagta Inter Milan ee Antonio Conte ayaa ka hadlay wararka suuqa ku jira ee sheegaya in kooxdiisu ay qorshaynayso inay lacag waalli ah hor dhigto xiddiga reer Argentine ee Lionel Messi, isla markaana xagaaga dambe ay kasoo afduubato Barcelona.
Lionel Messi ayaa heshiiska uu kula jiro Barcelona waxa uu ku eg yahay dhamaadka xili ciyaareedka soo socda, waxaanay kooxda reer Spain ka walaacsan tahay xidhiidhka aan fiicnayn ee u dhexeeya maamulka sare iyo ciyaaryahankan oo sababi karaysa inay burburaan wada-hadallo ku saabsanaa sidii uu heshiis cusub ugu saxeexi lahaa oo dhowaan bilaabmay.
33 jirkan oo kooxdiisa u dhaliyey 25 gool oo horyaalka LaLiga ah iyo 21 gool oo uu caawiye ka noqday, ayay warbaahinta Talyaanigu sheegtay in Inter Milan ay xidhiidh la samaynayso, isla markaana xagaaga soo aaddan ay hordhigi doonaan saddex sannadood oo heshiis ah iyadoo sannad walba mushahar loo siinayo 45.5 milyan Gini.
Tababare Antonio Conte ayay warbaahintu weysiisay waxa uu kala socdo doonista kooxdiisa, waxaanu ku jawaabay: “Waxaynu ka hadlaynaa kubadda cagta male-awaalka ah. Marka la eego xaaladaha waqtigan, lalama xidhiidhin karo Inter, sababto badan darteed.
“Ilama aha inuu jiro qof waalan oo dunidan guudkeeda aan doonayn Messi, laakiin xaaladaha noocan ah, waxa dhab ah inuu aad iyo aad iyo aad uga fog yahay Inter, marka la eego waxa aanu qabanayno iyo waxa aanu isku dayayno inaanu dhisno.
“Waxaanu u baahanahay inaanu abuurno sees adag, kaddib ayaa laga yaabaa… waan ku celinayaa, tani waa kubbad male-awaal ah; si kastaba, waxaan jecelahay marka male-awaalku jiro, kooxda lala xidhiidhinayo mar walbana ay tahay Inter.”